Global Voices teny Malagasy » Shina: Tantara ratsin’ny resaka akoho mitsindrona ‘hormone’ aroson’ireo orinasa ‘Fast Food’ maro rantsana erantany · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 22 Novambra 2019 6:10 GMT 1	 · Mpanoratra Oiwan Lam Nandika (fr) i Abdoulaye Bah, avylavitra
Sokajy: Azia Atsinanana, Etazonia, Japana, Shina, Taiwan (ROC), Fahasalamàna, Mediam-bahoaka, Sakafo, Toekarena sy Fandraharahàna
Vao haingana no naboraky  ny fahitalavi-panjakana fa raha kely indrindra dia roa amin'ireo mpamatsy akoho an'ireny orinasa maro rantsana manolotra sakafo vita haingana ireny, amerikàna, japôney ary taioanezy, no mamahana ny akohon-dry zareo aminà hormona tafahoatra sy karazana antiobiôtika 18, mba hiompiana ‘akoho anaty fotoana fohy’ izay miainga amin'ny 30 gr ka lasa 3,5 kg ao anatin'ny 40 andro.
Ankehitriny, i Shina no tsena goavana indrindra ho an'ny indostrian'ny sakafo tonga dia vonona. Ny KFC izay anisan'ny ao anatin'ny vondrona Yum , izay mahavita mahazo ny 44% amin'ny vola matiny ao Shina amin'izao fotoana izao, ary lasa ho ny lasibatra voalohany indrindra amin'ity tantara ratsin'ny akoho sesehana hormona ity. Araka ny tatitra iray an'ny masoivoho momba ny fiarovana ara-tsakafo ao Shanghai [teny shinoa, zh], teo anelanelan'ny 2010 sy 2011, tamin'ireo santionan-tsakafo 19 nomen'ny Yum!, valo no tsy nahafeno ny valin'ny fitsapàna momba ny fiarovana ara-tsakafo noho izy ireo misy antibiôtika.
美丽人生2673263427：Tena nanana vintana aho. Efa nihinana ny hena misy ractopamine, ny ronono mifangaro mélamine , vokatra avy aminà lavaka tadin-kiraro efa nampiasaina, ny fanafody sandoka, ny atody voatrolombelona, ny akoho terena hitombo haingana, ny divay feno akora plastika  … Efa mahazatra ahy ireo vokatra rehetra feno akora mampididoza. Eo am-piandrasana poizina misimisy kokoa mba hampitsahatra ny fanànako vintana amin'ny farany.
Satria voasaringotra amin'ilay tantara ratsy ireo orinasa vahiny maro rantsaha mpanao sakafo vita malaky, izay heverina ho toy ny azo itokiana amin'ny resaka fiarovana ara-tsakafo raha miohatra amin'ireo toerampisakafoana efa eo an-toerana, misy amn'ireo shinoa sasany mpaneho hevitra no nanararaotra ilay fotoana mba hamelezana ireo marika vahiny. Mifanindran-dàlana amin'izay, ny hafa mamaly hoe ireo manampahefana tomponandraikitra no tokony homena tsiny. Ito ambany io ny fantina iray avy amin'ireo fanehoankevitra  [zh] notsongaina avy amin'ireo fifanakalozana tao amin'ny ifeng.com :
Ny mpisera sasantsasany namorona ny hoe teorian'ny firaisana tsikombakomba momba ilay tantara ratsy  [zh]:
楚奇文kevin￼ ：Raha ny marina, ireo akoho fotsy volo, raha lazaina amin'ny fomba hafa dia ireo akoho natosika halaky be ny fitomboany, dia tsiambaratelo tsara hidy efa hatramin'ny taona marobe. Ompiana amin'izany fomba izany ny akoho any rehetra any manerana izao tontolo izao. Ny fanelezana ireny vaovao ireny dia natao mba hanalàna baraka ny Yum! Hanabantiana sy hamelezana ny fanjakana imperialy amerikàna. Vao tsy ela akory, nataon'ny governemanta amerikana izay nanahirana ireo kaompania shinoa, jereo ireo tantara ratsy manodidina ny CNPC, Huawei ary ny ZTE Corporation. Mazava loatra fa resaka valifaty ilay izy.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/11/22/145002/
 masoivoho momba ny fiarovana ara-tsakafo : http://www.21cbh.com/HTML/2012-12-21/zONDE4XzU4ODkzOQ.html
 fanamarihana manebaka : http://weibo.com/login.php?url=http%3A%2F%2Fweibo.com%2F2673263427%2Fzbir3EvuH
 ny ronono mifangaro mélamine: https://globalvoicesonline.org/specialcoverage/2008-special-coverage/poisonous-milk-scandal-2008/
 ny divay feno akora plastika: http://english.cri.cn/6909/2012/11/20/2724s734030.htm
 ny fantina iray avy amin'ireo fanehoankevitra: http://www.weibo.com/1988800805/zarzXzPgu
 teorian'ny firaisana tsikombakomba momba ilay tantara ratsy: http://www.weibo.com/login.php?url=http%3A%2F%2Fweibo.com%2F2399790171%2FzbhcvrPv5